tareen A in soo bandhigay safarka ah dunida of extravagance tareen ku soo laabtay 1982 waa isla tareenkaasi oo weli ah xulashada koowaad ee inbadan oo safar Yurub ah iyo taageerayaal Tareen raaxo leh. Sidaas, qof kasta oo u muuqda inuu ku raaxeysto tababbarka raaxada ee ka baxsan isbarbar dhiga, Venice Simplon Orient Express waa habka loo sameeyo. ugu The safarka caanka ah of this baxsado raaxo leh u dhaxaysa London iyo Venice. Si kastaba ha ahaatee, badan ha hor istaagina karaa dheeraad ah ka socday Istanbul oo Berlin, la Berlin isagoo stop la soo dhaafay bilaabay waayo tareenka. Markii aad fuusho tareenkaan, aad leedahay qaar ka mid ah maqaayad ugu fiican adduunka ka shaqeeya cuntada iyo qol hal iyo la wadaago in ay yihiin wax 5-star.
tareen A in si dhab ah ilaa u nool yahay dhaqanka boqornimada, Belmond Royal Scotsman waa a riyo rumow. In ka mid ah hogaanka 3 tareenada raaxo, Belmond ayaa Kaapelitalo wadooyinka oo aad jecelaato. Kuwaas waxaa ka mid Iskooj Malt khamrada Trail, Mucjiso muuqaal dabiici ah Western, Scotland ayaa Classic Splendours, kayntii Lakes & Gardens, iyo wax badan oo dheeraad ah. Belmond faanaa adeegyada HBS, sidoo! 4-maalin Highland Classicmost waa safar ugu caansan. Tareenka ayaa ka waddaa ka April in October, oo waxay qarinayaan Bbc badan oo gabi ahaanba qurux dabiici ah, oo ay ku jiraan Isle of Skye. dib u fadhiiso oo nasasho by daaqadaha galaas weyn, SIP on qaar ka mid ah raagay fiican oo ka burqadaan badan quruxda waa Scotland.
Safar A in Europe waxaa ka mid ah Tareenadu raaxo iyo farxad in ay xaq u gaar ah horeba, laakiin safar loogu baxayo Yurub tareenadan midkoodna waa WALBA. Iibso tigidh tareen kasta oo la raaco xitaa laga bilaabo barta ilaa barta Save A tareenka iyo bilowdo riyaaqayaa Europe.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama waxaad halkan u awooddo: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-luxurious-trains%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)